1 Beresosɛm 19:1-19
19 Akyiri yi, ɛbae sɛ Ammonfo hene Nahas+ wui, na ne ba bedii n’ade.+ 2 Ɛnna Dawid kae sɛ: “Mɛyɛ Nahas ba Hanun adɔe,+ efisɛ ne papa yɛɛ me adɔe.”+ Enti Dawid somaa abɔfo sɛ wɔnkɔkyekye ne werɛ, ne papa wu no ho, na Dawid nkoa no kɔɔ Hanun nkyɛn, Ammonfo+ asase so, sɛ wɔrekɔkyekye ne werɛ. 3 Ɛnna Ammon mpanyimfo bisaa Hanun sɛ: “Wugye di sɛ Dawid pɛ sɛ odi wo papa ni w’anim nti na wasoma sɛ wɔmmɛkyekye wo werɛ yi? Wunnye nni sɛ ɔrebɛhwehwɛ+ w’asase so de apɛ ɔkwan a ɔbɛfa so adan abutuw nti na ne nkoa aba wo nkyɛn yi?”+ 4 Enti Hanun kyeree Dawid nkoa+ no yii wɔn bogyesɛ,+ na otwitwaa wɔn ntade so besii wɔn to,+ na ɔma wɔkɔe.+ 5 Ɛnna nkurɔfo kɔkaa mmarima no asɛm kyerɛɛ Dawid. Ɛhɔ ara na ɔsoma kohyiaa wɔn efisɛ na wɔagu wɔn anim ase pɔtɔɔ; na ɔhene kae sɛ: “Montena Yeriko+ nkosi sɛ mo bogyesɛ befuw kuhaa ansa na moasan aba.” 6 Akyiri yi, Ammonfo no hui sɛ wɔn ho abɔn+ Dawid. Ɛno nti Hanun+ ne Ammonfo no de dwetɛ dwetikɛse apem+ kogyee nteaseɛnam+ ne apɔnkɔsotefo fii Mesopotamia ne Aram-Maaka+ ne Soba.+ 7 Enti wonyaa nteaseɛnam+ mpem aduasa abien, na Maaka hene ne ne nkurɔfo bɛkaa wɔn ho.+ Ɛnna wɔbɛbɔɔ nsra wɔ Medeba,+ na Ammonfo no fi wɔn nkurow mu boaboaa wɔn ano sɛ wɔrebɛko. 8 Dawid tee no, ɛhɔ ara na ɔmaa Yoab+ ne nnɔmmarima no ne asraafo+ nkae no nyinaa kɔɔ hɔ. 9 Na Ammonfo kotwaa ɔko mpasua wɔ kurotia, na ahene+ a wɔbae no kogyinagyinaa petee mu. 10 Bere a Yoab hui sɛ dɔm no bi wɔ n’anim ne n’akyi nyinaa no, ntɛm ara na ɔpaw Israel mmarima akantinka no bi kɔɔ mpasua so kohyiaa Siriafo no.+ 11 Na ɔde dɔm a aka no maa ne nua Abisai+ sɛ wontwa ɔko mpasua nkohyia Ammonfo+ no. 12 Na ɔkae sɛ: “Sɛ Siriafo+ no ahoɔden boro me so a, bra begye me;+ na sɛ Ammonfo nso ahoɔden boro wo so a, me nso mɛba abegye wo.+ 13 Yɛ den,+ na yɛmfa akokoduru nni mma yɛn man ne yɛn Nyankopɔn nkurow,+ na Yehowa de, nea eye n’ani so na ɔbɛyɛ.”+ 14 Ɛnna Yoab ne ne dɔm no kɔɔ wɔn anim kohyiaa Siriafo no wɔ ɔko no mu,+ na woguan+ fii n’anim. 15 Ammonfo no hui sɛ Siriafo aguan, enti wɔn nso woguan+ fii ne nua Abisai anim, na wɔsan kɔɔ kurow no mu.+ Akyiri yi, Yoab baa Yerusalem. 16 Bere a Siriafo no hui sɛ wɔadi nkogu+ wɔ Israel anim no, wɔsomaa abɔfo sɛ wɔnkɔfa Siriafo a wɔwɔ asubɔnten kɛse+ no ho no ne Hadadeser sahene Sofak mmra. 17 Asɛm no duu Dawid asom ara pɛ, ɔboaboaa Israel nyinaa ano kotwaa Yordan kɔɔ wɔn so kotwaa wɔn so mpasua.+ Bere a Dawid kɔɔ mpasua no so kohyiaa Siriafo no, wɔne no koe. 18 Nanso Siriafo no guan+ fii Israel anim; na Dawid kunkum Siriafo mpemnson a wɔtete nteaseɛnam so ne mmarima a wɔnam fam mpem aduanan, na ɔsahene Sofak nso, okum no.+ 19 Bere a wɔn a wɔyɛ Hadadeser nkoa no hui sɛ wɔadi nkogu wɔ Israel anim no,+ ɛhɔ ara na wɔne Dawid yɛɛ asomdwoe apam, na wɔsom no,+ na Siriafo ammɔ wɔn ho mmusu sɛ wɔbɛko agye Ammonfo bio.+